Ecotrin (အီကိုထရင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Ecotrin (အီကိုထရင်း)
Ecotrin (အီကိုထရင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Ecotrin (အီကိုထရင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Ecotrin (အီကိုထရင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Ecotrin ကို အဖျားကျစေဖို့နဲ့ ကြွက်သားကိုက်ခဲခြင်း၊ သွားကိုက်ခြင်း၊ အအေးမိခြင်း၊ ရာသီလာစဉ်နာကျင်ခြင်းနှင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဝေဒနာများ သက်သာစေဖို့ အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။
အဆစ်ရောင်နာလိုမျိုး အခြေအနေတွေမှာလည်း ဝေဒနာသက်သာစေဖို့၊ အရောင်ကျစေဖို့ အသုံးပြုပါသေးတယ်။ နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်းနှင့် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ဖို့၊ ကုသဖို့ တစ်ခါတစ်ရံ အသုံးပြုပါတယ်။
နှလုံးနှင့် သွေးကြောရောဂါတို့တွက် အက်စပရင်ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်သာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ Ecotrin အတွက် အခြားအသုံးပြုပုံများလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ထပ်မံသိရှိလိုသည်များအား ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူတို့ကို မေးမြန်းပေးပါ။
Ecotrin (အီကိုထရင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
သောက်သုံးနိုင်သော ဆေးပြားအဖြစ်လာပါတယ်။ အစာရှိရှိ၊ မရှိရှိ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ရေတစ်ခွက်ဖြင့် သောက်သုံးပေးပါ။
ဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မေးမြန်းလိုသည်များအတွက် ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူတို့ဖြင့် မေးမြန်းပေးပါ။
Ecotrin (အီကိုထရင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Ecotrin ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Ecotrin ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Ecotrin ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Ecotrin ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Ecotrin (အီကိုထရင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါတို့ ဖြစ်နေပါက ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူတို့ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်နေခြင်း၊ နို့တိုက်မိခင်ဖြစ်နေခြင်း။ ဘာကြောင့်လဲဆိုဆော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်၊ နို့ချိုတိုက်ကျွေးနေချိန်မှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသော ဆေးဝါးများသာ သောက်သုံးသင့်လို့ပါ။
အခြားဆေးဝါးများ သောက်သုံးဖြစ်နေခြင်း။ ဘယဆေးဝါးများနှင့် ဖြည့်စွက်ဆေးဝါးတွေလို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ ဝယ်ယူရရှိနိုင်သော ဆေးဝါးများအားလုံးလည်း အကျုံးဝင်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်က အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းတို့တွင် သွေးထွက်ခဲ့ဖူးခြင်း၊ ဟေမိုဖီးလီးယားလို သွေးမတိတ်သောရောဂါတို့ရှိနေခြင်း။
aspirin နှင့် Advil, Motrin, Aleve, Orudis, Indocin, Lodine, Voltaren, Toradol, Mobic, Relafen တို့လိုမျိုး NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drug)၊ အခြားသော ဆေးဝါးတို့ဖြင့် ဓါတ်မတည့်မှုများ ရှိဖူးခြင်း
အဖျားရှိသော အထူးသဖြင့် တုပ်ကွေး၊ ရေကျောက်တို့ပါဖြစ်နေသော ကလေးနှင့် ဆယ်ကျော်သက်များကို Ecotrin မပေးသင့်ပါ။ ကလေးတွေမှာ ပြင်းထန်ပြီး သေစေနိုင်သော Reye’s syndrome လို့ခေါ်တဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Ecotrin (အီကိုထရင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ခွဲစိတ်မှုမပြုလုပ်ခင်မှာ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်၊ သွားဆရာဝန်တို့ကို သောက်သုံးလျက်ရှိတဲ့ ဆေးဝါးအကုန်လုံးပြောပြထားပါ။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသော ဆေး၊ မညွှန်ကြားထားသော ဆေးနှင့် ဘယဆေးတွေလည်း အကျုံးဝင်ပါတယ်။
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C,D ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်များတွင် စိတ်ချရမှုရှိမရှိကို မသိရသေးသည့် ဆေးဝါးများနှင့်ပတ်သက်၍ ကောင်းကျိုးနှင့် ဆိုးကျိုးများကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများအမြဲလုပ်ပါ။
Ecotrin နဲ့ သူရဲ့ ဖြိုခွဲခံထားရတဲ့ လက်ကျန်ပစ္စည်းတွေဟာ နို့ရည်ထဲမှာ အနည်းငယ်ပါဝင်လာပါတယ်။ အခါအားလျော်စွာ အသုံးပြုခြင်းက ကလေးပေါ်မှာ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ မရှိသေးတာကြောင့် အများအားဖြင့် နို့တိုက်ခြင်းကို ရပ်တန့်ဖို့ မလိုပါဘူး။
ဒါပေမဲ့လည်း အချိုးအစားများများကို ပုံမှန်အသုံးပြုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ နို့စောစောဖြတ်ဖို့ လိုပါပြီ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်နေမယ်၊ နို့တိုက်မိခင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် Ecotrin အသုံးမပြုခင်မှာ ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူတို့ဖြင့် အမြဲတစေ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Ecotrin (အီကိုထရင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Ecotrin က အောက်ပါ ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဓါတ်မတည့်မှုများ။ အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ အသက်ရှုကျပ်ခြင်း၊ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျာနှင့် လည်ချောင်းတို့ ဖောရောင်လာခြင်း၊
မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်းနှင့် အစာအိမ်အောင့်ခြင်းတို့ ပြင်းထန်စွာ ခံစားရခြင်း
အကြားအာရုံဆိုင်ရာ ပြဿနာများဖြစ်ခြင်း၊ နားအူခြင်း
မစိုးရိမ်ရသော ဆိုးကျိုးများကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်ဆေးတွေက Ecotrin (အီကိုထရင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Ecotrin ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်)
ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Aspirin 81 ဖြင့်ဓါတ်ပြုသော ဆေးဝါးတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
warfarin, heparin တို့လိုမျိုး သွေးကြဲဆေးများ
prednisone လိုမျိုး Corticosteroids , methotrexate, valproic acid
ginkgo biloba လိုမျိုး ဘယဆေးများ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Ecotrin (အီကိုထရင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Ecotrin က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Ecotrin (အီကိုထရင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အများအားဖြင့် သောက်သုံးနိုင်မည့် ပမာဏ။ ရောဂါလက္ခဏာပြနေချိန်တွင် ၄နာရီတစ်ခါ ၄ပြားကနေ၈ပြားအထိ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
သောက်သုံးနိုင်မည့် အများဆုံးပမာဏ။ တစ်ရက်ကို ၄၈ပြားအထိ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
အများအားဖြင့် သောက်သုံးနိုင်မည့် ပမာဏ။ ရောဂါလက္ခဏာပြနေချိန်မှာ ၄နာရီတစ်ခါ ၁ပြား၊၂ပြားသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
သောက်သုံးနိုင်မည့် အများဆုံးပမာဏ။ တစ်ရက်ကို ၁၂ပြားထိ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Ecotrin (အီကိုထရင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်မှာ စိတ်ချရမှုအနေအထားကို အပြည့်အဝနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များ ထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Ecotrin (အီကိုထရင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Ecotrin ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Ecotrin Safety Coated 325mg
Ecotrin Safety Coated 81mg
အရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ် ဆေးပမာဏလွန်သွားတဲ့အခြေအနေတွေမှာ အရေးပေါ်ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူပါ။
လက်ရှိသောက်သုံးလျက်ရှိတဲ့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည့် ဆေးဝါးကော၊ အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်သော ဆေးဝါးများပါ ချရေးထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ အသုံးဝင်နိုင်စေဖို့ပါ။
Ecotrin ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Ecotrin oral. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-12051/ecotrin-oral/details. Accessed October 14, 2016.
Ecotrin. https://www.drugs.com/mtm/ecotrin.html. Accessed October 14, 2016.
Ecotrin. http://www.ecotrin.com/en/Products.html. Accessed October 14, 2016.
Aspirin . http://reference.medscape.com/drug/zorprin-bayer-buffered-aspirin-343279#6. Accessed October 14, 2016.